Mindat ah Helicopter Lawng si loin Fighter Jet le Drone zong in SAC Ralkap nih an Kal Hnawh Hna – Hakha Cherry
Mindat khua ah nihin zaanlei ah SAC ralkap helicopter pahnih an phak pin ah Fighter vanlawng pakhat le ral ngiatnak Drone vanlawng pahnih zong SAC ralkap nih an hman, tiah Mindat khua mipi uknak bu nih thawng an chuah.
Tu zaan sml. 9:47 tiang ah Mindat khua Nichuahlei kahdohnakadai cang i, Nitlaklei belte ah kahodhnakaum rih.
SAC Sniper le miakpi pawl in CDF-Mindat an um lai tiah an ruahnak khuachung hmunhna pawl an kah hna.
SAC ralkal bu no. 247 ah ralkap thazaang an chap i uniform loin misawhsawh thilthuam aa hrukmi zong an um.
Mindat he meng 18ahlatnak Kyaukhtuh khua in SAC nih ralkap thazaang zong chap an timh, tiah Mindat mipi uknak bu nih thawng an thanh.
Burmese မင်းတပ်မြို့ ည ၉:၄၇ နာရီအထိ နောက်ဆုံးအ‌ခြေအနေ ညနေပိုင်းမှာ CDF-MINDAT ကနေ မင်းတပ်မြို့ အရှေ့ဘက်ခြမ်းတိုက်ပွဲ တိုက်ပွဲကို ရပ်ဆိုင်း နိုင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ် အနောက်ဘက်ခြမ်းတိုက်ပွဲကတော့ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ညနေပိုင်းမှာ စစ်သုံး ရဟတ်ယာဉ် ၃ စီး၊ တိုက် လေယာဉ် ၁ စီး၊ ဒရုန်းယာဥ် ၂ စီးနဲ့ မင်းတပ် မြို့ပေါ် ဝဲပျံခဲ့ပြီး နယ်မြေအခြေအနေများကို ထပ်မံလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ စစ်သုံး ရဟတ်ယာဥ် ၃ စီးက ၂၇၄ တပ်ရင်းမှာ လူအင်အား လက်နက်အင်အား ဝင်ရောက်ဖြည့်တင်း
မြို့တွင်းမှာလည်း စကစတပ်တွေက လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ လူနေအိမ်တွေကို ထုတာ၊ စစနိုက်ပါနဲ့ သွားလာသူပြည်သူတွေကို ပစ်ခတ်နေတာတွေ ရှိပါတယ်။
၂၇၄ တပ်ရင်းက စကစတပ်တွေဟာ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ မြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ တစ်ချို့က ကင်းပုန်းဝပ်၊ တစ်ချို့က လှည့်လည်နေပါ တယ်။ ကျောက်ထုမြို့ကနေ စကစ စစ်ကူလာမည်​လို့ သိရပါတယ်။The Chin Journal May 14, Yangon (MDTပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး သတင်းအဖွဲ့)